Imibuzo evame ukubuzwa - Xuzhou Sanhe okuzenzakalelayo Control Equipment Co., Ltd.
Uyakwamukela ukwenza ngokwezifiso？
Vele, singakwemukela ukwenza ngokwezifiso. Singabantu professional R & D, ukukhiqizwa futhi yokuthengisa imboni. Sizokwenza ngokwezifiso imikhiqizo ngokuvumelana nezidingo zakho.
2, Imikhiqizo yakho inesidingo esincane sobuningi be-oda, kepha yini engingayenza ngomsindo uma ngifuna ukuthenga inani elincane lamasampuli? Njengengcezu ezi-1-2?
Imvamisa, sizokukhokhisa imali yesampula nemali yokuthumela, kepha ungakhathazeki, uma usifaka i-oda elisemthethweni ngokuhamba kwesikhathi, sizokhipha imali yesampula ku-oda
ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, i-aquarium thermometer yedijithali, i-thermometer yedijithali, isilawuli sokushisa se-incubator, isilawuli se-digital thermostat, isilawuli sokushisa se-thermostat,